FALANQEYN:- Arsenal Vs Southampton, Wenger Oo Fursad Siin Doona Da’yartiisa,Arsenal Oo Heysata Rikoor Aysan Ku Farxeyn,Dhacdooyinkii iyo Xaqiiqooyinkii Laga Qoray | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » FALANQEYN:- Arsenal Vs Southampton, Wenger Oo Fursad Siin Doona Da’yartiisa,Arsenal Oo Heysata Rikoor Aysan Ku Farxeyn,Dhacdooyinkii iyo Xaqiiqooyinkii Laga Qoray
FALANQEYN:- Arsenal Vs Southampton, Wenger Oo Fursad Siin Doona Da’yartiisa,Arsenal Oo Heysata Rikoor Aysan Ku Farxeyn,Dhacdooyinkii iyo Xaqiiqooyinkii Laga Qoray	Weeraryahan Olivier Giroud ayaa seegi doonaa kulanka Arsenal ee koobka EFL Cup heerkiisa quarter-final ay la ciyaari doonto Southampton maadaama uu dhaawac qabo laacibkaan.
Daafaca Mathieu Debuchy ayaa sidoo kale dhaawac looga saaray ciyaartii u dambeysay kooxdiisa waxaana la filayaa inuu qaato dhaawaciisa mudo dheer Laakiin weeraryahanka ku cusub naadigaan Lucas Perez ayaa diyaar u ah ciyaarta ka dhici doonta garoonka Emirates isagoona ka soo kabsaday dhaawaca Anqowga ka soo gaaray.
Laacibka khadka dhexe Sofiane Boufal ayaa diyaar u ah Southampton laakiin waxay weyn doonaan Steven Davis oo xanuunsan.
Weeraryahan Josh Sims, oo 19jir ah ayaa suura gal inuu nasto ciyaartaan ama fursad kale uu helo maadaama kulankiisii ugu horeeyay loo gacan geliyay ciyaartii Axada 1-0 ay kaga adkaadeen Everton.
Goolhayaha Argentine Emiliano Martinez ayaa ku soo bilowday labadii ciyaar ee Arsenal tartankaan EFL Cup ay ka guuleysatay Nottingham Forest iyo Reading.
“Waxaan rabnaa inaan aadno Wembley, waxaan rabnaa inaan sameyno wax walbo oo suura gal ka dhigi kara guul aan gaarno ,” ayuu yiri 24-jirkaan.
Macalinka Southampton Claude Puel ayaa rajeynaya inuu ku guuleysto koobkaan xili ciyaareedkiisa ugu horeeyay uu Saints wado.
“Waa fursad fiican oo aan ku sameyn doono guul ciyaartii ugu dambeysay ee Everton waxay aheyd mid cajiib ah oo awoodeena ciyaareed ay wanaagsaneyd .”
Arsenal oo heysata Rikoor aysan ku farxeyn.
Naadiga Arsenal ayaa sedexdii kulan ee ugu dambeysay oo gurigooda ay ku ciyaaraan League Cup iyagoo ka hortagaya kooxaha Premier League waxay la kulmeen guul daro kaliya hal gool ayya dhaliyeen sedexdaas kulankaan.
Gunners ayaa hormar ka sameyneysay mid ka mid ah shantii mar ugu dambbeysay ay timaado heerka quarter-final ee koobkaan, waxayna hormarkaas sameysay xilli ciyaaredkii 2010-11 oo 2-0 ay kaga adkaatay Wigan.
Arsenal ayaa khasaartay mid ka mid ah todobadoodii kulan ugu dambeysay ay ka hortagaan koobkaan League Cup naadiga Southampton.
Ma jiro ciyaaryahan dhaliyay goolal ama kun lug yeeshay oo ka badan xilli ciyaareedkaan tartankaan EFL Cup laacibka Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain (Wuxuu dhaliyay Sedex gool isagoona caawiyay mid kale ).
Oxlade-Chamberlain ayaa goolal dhaliyay sedexdii kulan ee ugu dambeysay oo Arsenal ay ciyaarto koobkaan EFL Cup.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/falanqeyn-arsenal-vs-southampton-wenger-oo-fursad-siin-doona-dayartiisaarsenal-oo-heysata-rikoor-aysan-ku-farxeyndhacdooyinkii-iyo-xaqiiqooyinkii-laga-qoray/">FALANQEYN:- Arsenal Vs Southampton, Wenger Oo Fursad Siin Doona Da’yartiisa,Arsenal Oo Heysata Rikoor Aysan Ku Farxeyn,Dhacdooyinkii iyo Xaqiiqooyinkii Laga Qoray</a>